Madaxweynaha K/Afrika oo soo gaabiyay safar uu dalka uga maqnaa - BBC News Somali
Madaxweynaha K/Afrika oo soo gaabiyay safar uu dalka uga maqnaa
Image caption Madaxweynaha K/Afrika oo soo gaabiyay safar uu dalka uga maqnaa
Madaxweyne Ramaphosa oo markii ugu horeesay tan iyo intii uu xafiiska la wareegay ka qeyb galayay shirkiisi ugu horeeyay ee dibadda ayaa intii uu ku sugnaa dalka Britain waxaa uu maalgashatada ku boorinayay inay maalgashadaan dalkaasi.
Hasayeeshe rabshadaha ka socda waqooyiga galbeed ee dalkaasi ayaa sii xumaaday dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay, waxaana dadka dibadbaxa dhigaya ay dalbanayeen fursado shaqo, guryo ay ku nooladaan iyo in la joojiyo musuqmaasuq ay shegeen inuu kajiro dalka Koonfur Afrika.
Warbaahinta dalkaasi ayaa kusoo warrantay in booliska ay adeegsadeen suntan dadka ka ilmeysiisa, si ay u kala eryaan dad xiray wadooyinka.
Waxaa la xiray dhamaan wadooyinka, iyadoo sidoo kalena dab la qbasiiyay gawaari badan, halka dukaamo dhowr ah na la bililiqeystay.
Dadku waxaa ay sidoo kale dalbanayeen inuu iscasilo guddoomiyaha gobolka. Madaxweyne Ramaphosa ayaa ugu baaqay dadka inay isdejiyaan, waxaana laamaha ammaanka uu ku amray inay xakameyaan xaaladda.